တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. LEE Sang-hwa အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. HONG Jongkee နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စွာတည်ရှိခဲ့သည့် မိတ်ဆွေ ကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် များအပြန်အလှန်လည်ပတ်ပြီး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု များကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စတွင် မိမိတို့နိုင်ငံမှ ကိုရီးယား နိုင်ငံအပေါ် ကူညီပေးအပ်ခဲ့မှုများရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီး စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးစသည့် ကဏ္ဍစုံလင်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးများရှိနေကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသော်လည်း စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုမလိုလားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှတပ်မတော်တိုင်းသည် မိမိတို့ နိုင်ငံ၊ မိမိတို့ပြည်သူပြည် သားများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းကို အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်သံအမတ်ကြီးက မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည်နှစ်ပေါင်း များစွာဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး မိမိမြန်မာနိုင်ငံသို့မလာရောက်မီ ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတက မြန်မာ-ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုတိုးတက်လာပါကြောင်း၊ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရတူညီမှုများရှိသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကိုမှာ ကြားခဲ့ပါကြောင်းပြောကြား သည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ၏စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန် အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. LEE Sang-hwa အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့ သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတ နိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Col. HONG Jongkee နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-ကိုရီးယား နှဈနိုငျငံသညျ နှဈပေါငျးမြားစှာ သံတမနျဆကျဆံရေးကောငျးမှနျစှာတညျရှိခဲ့သညျ့ မိတျဆှေ ကောငျးနိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ မြားအပွနျအလှနျလညျပတျပွီး ကာကှယျရေးဆိုငျရာပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု မြားကို တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ ၁၉၅၀ ပွညျ့နှဈကိုရီးယားကြှနျးဆှယျကိစ်စတှငျ မိမိတို့နိုငျငံမှ ကိုရီးယား နိုငျငံအပျေါ ကူညီပေးအပျခဲ့မှုမြားရှိကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးဆောငျရှကျပွီး စီးပှားရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ ကနျြးမာရေး၊ အားကစား၊ ကုနျသှယျရေး၊ စိုကျပြိုးရေးစသညျ့ ကဏ်ဍစုံလငျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျသညျ့ အခှငျ့အရေးမြားရှိနကွေောငျး၊ မိမိတို့တပျမတျောသညျ နိုငျငံတျောကာကှယျရေး တာဝနျကို ထမျးဆောငျနသေျောလညျး စဈပှဲဖွဈပှားမှုကိုမလိုလားကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး၊ နိုငျငံတိုငျးမှတပျမတျောတိုငျးသညျ မိမိတို့ နိုငျငံ၊ မိမိတို့ပွညျသူပွညျ သားမြား၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို ကာကှယျနိုငျရနျအတှကျ ကာကှယျရေးစှမျးရညျမွှငျ့တငျခွငျးကို အမွဲမပွတျဆောငျရှကျနရေမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ဧညျ့သညျတျောသံအမတျကွီးက မိမိတို့နှဈနိုငျငံသညျနှဈပေါငျး မြားစှာဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခဲ့ပွီး မိမိမွနျမာနိုငျငံသို့မလာရောကျမီ ကိုရီးယားသမ်မတ နိုငျငံသမ်မတက မွနျမာ-ကိုရီးယားနှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှု တဈနှဈထကျတဈနှဈ ပိုမိုတိုးတကျလာပါကွောငျး၊ သမိုငျးကွောငျးအရ၊ ယဉျကြေးမှုအရတူညီမှုမြားရှိသဖွငျ့ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးပွီး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျနိုငျသညျကိုမှာ ကွားခဲ့ပါကွောငျးပွောကွား သညျ။
ယငျးနောကျ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ကာကှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေး၊ မွနျမာနိုငျငံ ၏စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး နှငျ့ အခွားစီးပှားရေးကဏ်ဍမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျအမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျ အလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။